Ngubani ozodla imifino yokuqala engaziwa? - I-BGR - IT TEL RELAY
Accueil » ISAYENSI Ngubani ozodla imifino yokuqala engaziwa? - I-BGR
Ngubani ozodla imifino yokuqala engaziwa? - I-BGR
Abasebenzi besikhungo i-International Space Station basanda kuthatha i-wayini. Amabhodlela ayishumi nambili wewayini elibomvu elimnandi badlule besuka eMhlabeni baya emkhathini futhi bathola elabhorethri ejikelezayo lapho ososayensi abayisithupha kufanele bayivumele ukuba ihlale unyaka ngaphambi kokuyithumela. Abakwazi ukuyiphuza, okudumazayo, kepha ukuhlolwa kuhlose ukukhombisa ukuthi ukukhipha imisebe yendawo kanye namandla adonsela phansi aphansi kungashintsha kanjani ukwakheka kanye nokunambitheka kwewayini.
Kwangenza ngacabanga: Ubani ozoba ngumuntu wokuqala ukudla imifino etshalwe ebusweni bomunye umhlaba?
Cabanga nje ungumuntu wokuqala ukuthola ukuthi kukhona ama-eggplants. Imibhalo yokuqala yakudala yama-eggplant ibuya emuva emakhulwini eminyaka ambalwa futhi akwaziwa ukuthi yaqalwa yini e-Afrika noma eNdiya, kepha kungenzeka ngokulinganayo. Kepha kuthiwani ngomuntu wokuqala owaphetha ukuluma, noma enye imifino yasendle?
Ngabe bayayibona, ngabe babecabanga ukuthi ibukeka imnandi futhi ingenele kuyo? Ngabe babuke izilwane ngenkathi zidla futhi bacabanga ukuthi kuphephile? Ngabe idolobhana labantu basendulo lavota ukunquma ukuthi ngubani ozoba ingulube yegadi? Cishe asazi futhi mhlawumbe ngeke sikwenze, kodwa njengoba sihlola uhlelo lwethu lwelanga futhi sithumela ohambweni olwakhiwe eMars futhi mhlawumbe ngaphesheya, laba bahambi abanesibindi bazodinga ukudla futhi kunengqondo ukukwenza lokho. cindezela lapho, uma kungenzeka.
Ososayensi eMhlabeni bebelokhu bezama izifaniso zenhlabathi yaseMartian ukuthola ukuthi kungenzeka kwenzakalani lapho. kufaka phakathi amazambane futhi kungenzeka ukuthi thina sikhule izilimo kwenye indawo kuneMhlaba. Kuyajabulisa, kepha njengakwisipiliyoni sewayinini, asazi ngempela ukuthi amazambane aseMars angahluka kanjani kubhatata.
Ingaphezulu leMars ligcwele ngemisebe eminingi kunalokho esibhekana nakho lapha. Emhlabeni. Lokhu kuphumela ekulahlekelweni kweMars komkhathi omkhulukazi namandla kazibuthe angenawo amandla. Uma sikhulisa amazambane ebusweni, ngisho nasendlini yokushisa engilazi lapho singalawula khona okuhlukahlukene, asinawo umbono wokusabela kwesitshalo noma umehluko ekukhiqizeni. imifino ekhiqizayo.
ngaze ngacwaninga ngocwaningo ukushintsha izakhi zofuzo ngaphambi kokuthunyelwa kwiplanethi ebomvu, ngethemba lokubenza zihambisane kakhulu nezimo lapho ekugcineni bezophoqelelwa ukuthi bakhule. Abaphenyi bayathemba ukuthi lokho kuyinyathelo eliya phambili ezitshalweni eziguqulwe kwiplanethi iMars ezingakhula izizukulwane ngezizukulwane.
Uma sibheka phambili esikhathini esizayo - futhi senze ezinye izifiso ezingekho emthethweni ngokuphelele mayelana nekhono lethu lokuthola bese sihamba siye exoplanets lapho impilo isivele ichuma - Indaba yokudla iba nzima ngokwengeziwe. Ngekusasa eliqanjiwe lapho ukuthunywa komuntu kugxuma ezweni langaphandle esivele ligcwele izitshalo nezilwane ezihlukile, sidlani?
Ikusasa elinjalo lilungiselela intuthuko emangalisayo yezobuchwepheshe, futhi mhlawumbe ukubheka phansi ekusebenziseni ithuluzi elisemagodleni omlingo kungaxwayisa abahambi abasendaweni ekude ngobungozi besitshalo esinoshevu ukuthi abakaze babone ngaphambili. Kepha nangaleso sikhathi, uma isayensi ikutshela ukuthi lo utamatisi onsundu onsundu osesandleni sakho uphephile, ngabe ukulungele ukuthatha ukuluma okokuqala kwemifino engafani nalutho?
Umthombo Wezithombe: I-Backround: NASA / ESO / NAOJ
Ososayensi basungule insimbi enqabayo ukucwila - BGR
Ngaphambi kokuba bavukele ngokungenakuvinjwa, bukela iqembu lamarobhothi amancane adlala ibhola - BGR
ASTUCES : 34 RECETTES SIMPLES D'OEUFS POUR TOUS